Maxaad ka xasuusataa dadkii dunida ugu caansanaa ee dhintay 2018? - BBC News Somali
Maxaad ka xasuusataa dadkii dunida ugu caansanaa ee dhintay 2018?
Dad ay ka mid yihiin siyaasiyiin, jileyaal iyo seynis yahanno ayaa raacay sannadkan sii dhammaanaya ee 2018
Seynis yahanno, jileyaal, fannaaniin, siyaasiyiin, ganacsato... kuwani waa qaar ka mid ah dadkii ugu caansanaa dunida ee dhintay intii lagu guda jiray sannadkan sii dhammaanaya ee 2018-ka.
1. Barfasoor Stephen Hawking
Seynisyahankan u dhashay dalka Ingiriiska, wuxuu ahaa nin ku xeel dheer cilmiga maadada Fiisigis-ka, wuxuuna noqday seynisyahankii ugu qaddarinta badnaa uguna caansanaa ee jiilkiisa.
Stephen Hawking wuxuu ahaa Seynis yahan caan ah
Wuxuu wakhti dheer la dagaallamayay cudur howl gab ka dhiga xiriirka maskaxda iyo murqaha oo afka qalaad lagu yiraahdo motor neurone.
259 qof oo dhintay iyagoo sawirro iska qaadaya
BBC oo ku dhawaaqday qofka ku guuleystay abaal marinta Komla Dumor
Stephen Hawking wuxuu 8-dii bishii Janaayo ee sannadkii 1942-kii ku dhashay magaalada Oxford. Wuxuuna 14-kii bishii Maarso ee sannadkan 2018-ka ku geeriyooday magaalada Cambridge, isagoo xilligaas ahaa 76 sano jir.
Oraah lagu xasuusto oo ka hartay ayaa ahayd sidan: "Tan koowaad, xasuusnow inaad mar walba hiigsato oo aad eegto xiddigaha sare, lugahaaga hoostoodana ha eegin. Tan labaad, waligaa haka niyad jabin shaqo. Shaqadu waxay kuu yeeleysaa micno, ujeeddada iyo noloshuna waxba ma aha shaqo la'aan. Tan saddexaad, haddii aad nasiib u yeelatid inaad hesho jacayl, xasuusnow waligaa hana iska tuurin".
Haweeneydan waxay ahayd fannaanad u dhalatay dalka Mareykanka oo si weyn loo yaqaannay magaceeda.
Aretha Franklin waxay ahayd boqoradda heesaha Soul-ka
Waxay fanka billowday iyadoo aad u da' yar, waxayna muteysatay in lagu magacaabo boqoradda heesaha loo yaqaanno Soul-ka.
Waxay noqotay haweeneydii ugu horraysay ee ku caan baxda qoob ka cayaarka Rock & Roll.
Aretha Louise Franklin, waxay 25-kii bishii Maarso ee sannadkii 1942-kii ku dhalatay magaalada Memphis ee dalka Mareykanka. Waxayna 16-kii bishii Agoosto ee sannadkan sii dhammaanaya ee 2018-ka ku geeriyootay magaalada Detroit ee isla dalkaasi Mareykanka.
Fannaanaddan ayaa sannadkii 2010 laga helay cudurka kansarka, sannadkii horena waxay ku dhawaaqday inay heesaha ka fariisatay.
Waxaa aad loogu xusuustaa heesaheeda Respect iyo Think, 20 goorna waxay kaalinta 1aad ka gashay tartammada heesaha ee Maraykanka, taariikh faneed soo socday muddo 70 sano ah.
Mr McCain wuxuu ahaa rug caddaa siyaasadeed oo u dhashay Mareykanka aadna loo yaqaannay, wuxuuna khibrad fara badan u lahaa dagaallada oo loogu aqoonsaday halyeey.
John McCain wuxuu Mareykanka u ahaa halyeey dhinaca dagaalka ah
Wuxuu ka tirsanaa xildhibaannada aqalka sare ee Mareykanka, oo uu ku matali jiray gobolka Arizona.
Siyaasigan wuxuu ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga.
Sannadkii 2008-di ayuu u tartamay xilka madaxweynaha Mareykanka, waxaana ka adkaaday Barack Obama.
John McCain wuxuu 29-kii bishii Agoosto ee sannadkii 1963-kii ku dhashay magaalada Coco Solo ee gobolka Panama.
Wuxuu la tacaalayay cudurka Kansarka waxa uuna 25-kii bishii Agoosto ee sannadkan ku geeriyooday magaalada Cornville ee gobolka Arizona.
George HW Bush wuxuu soo noqday madaxweynihii 41-aad ee dalka Mareykanka.
Madaxweyne George HW Bush wuxuu ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka xilligii dagaalki labaad ee dunida
Markii hore waxa uu madaxweyne ku xigeen u soo ahaa madaxweyne Ronald Reagan, wuxuuna noqday madaxweyne ku xigeenkii ugu horreeyay ee mudoo 150 sano gudahood ah loo doortay xilka madaxweynaha.
Ciidamada badda ee Mareykanka ayuu ka mid ahaa xilligii uu dhacayay dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna isagoo ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga soo noqday xildhibaan aqalka wakiillada u matala gobolka Texas.
Wuxuu 12-kii bishii Juunyo ee sannadkii 1924-kii ku dhashay magaalada Milton. Wuxuuna 30-kii bishii Nofeembar ee sannadkan 2018-ka ku geeriyooday magaalada Houston ee gobolka Texas.
Waxay ahayd xaaska madaxweynihii 41-aad ee dalka Mareykanka.
Barbara Bush waxay soo noqotay xaaska madaxweynaha Mareykanka iyo hooyada madaxweynaha Mareykanka
Barbara Bush waxay ahayd haweeneydii labaad ee abid taariikhda dalka Mareykanka ka soo noqotay marwada joowaad iyo hooyada koowaad labadaba, iyadoo marna ahayd xaaska madaxweyne Mareykanka maamula mar kalena noqotay hooyada dhashay madaxweyne Mareykan ah.
8-dii bishii Juunyo ee sannadkii 1925-kii ayey ku dhalatay magaalada New York.
17-kii bishii Abriil ee sannadkan sii dhamaanaya ee 2018-ka ayeyna ku geeriyootay magaalada Houston ee gobolka Texas.
6. Morgan Tsvangirai
Tsvangirai wuxuu ahaa siyaasi aad looga yaqaanno dalka Zimbabwe, isagoo muddo dheer mucaarad ku ahaa isla markaana loollan galinayay hogaamiyihii hore ee dalkaas Robert Mugabe.
Morgan Tsvangirai wuxuu loollan siyaasadeed galiyay Robert Mugabe
Isagoo ra'iisul wasaare ah ayuu ku qanci waayay hannaanka uu dalka ku socdo wuxuuna sannadkii 2017-kii ka qeyb qaatay isku day waddada loogu xaarayay in xukunka laga tuuro madaxweyne Mugabe.
10-kii bishii Maarso ee sannadkii 1952-kii ayuu ku dhashay magaalada Gutu ee dalka Zimbabwe. Wuxuuna 14-kii bishii Febraayo ku geeriyooday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
7. Sridevi Kapoor
Sridevi oo ahayd atariisho caan ka ah dalka Hindiya iyo guud ahaan caalamka, waxay dad badan u aqoonsanaayeen iney ahayd haweeneydii ugu horreysay ee xiddig sare ka noqota shirkadda filimada ee Bollywood-ka.
Sridevi waxay taageero badan ku lahayd Hindiya iyo caalamka intiisa kaleba
Waxay ka soo muuqatay 300 oo filim, intii ay ku guda jirtay xirfaddeeda jilaanimo oo soo socotay muddo 50 sano ah. Waxay ku guuleysatay abaal marin sharafeedka darajada afaraad, ee la siiyo qof shacab ah oo Hindi ah, taasoo lagu magacaabo Padma Shri.
13-kii bishii Agoosto ee sannadkii 1963-kii ayey ku dhalatay magaalada Sivakasi ee dalka Hindiya. Waxayna 24-kii bishii Febraayo ee sannadkan 2018-ka ku geeriyootay magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta.
8. Rachael Bland
Mrs Bland oo ahayd wariye ka tirsan idaacadda BBC Radio 5 Live, waxay soo jeedin jirtay wararka iyo barnaamijyada.
Rachael Bland waxay tabin jirtay barnaamij looga hadlo kansarka
Iyadoo la xanuunsaneysay cudurka Kansarka ayey ka qeyb qaadan jirtay barnaamij caan ah oo looga hadlo arrimaha Kansarka.
Waxay qormo la wada jecleystay ka sameysay nolosheeda iyo sida ay ula tacaashay cudurkaas, iyadoo taariikh nololeedkeedana u diyaarisay cunugeeda yar oo hadda 2 sano jir ah.
Dad fara badan waxay ka yaabisay markii ay si geesinimo leh u shaacisay in la gaaray wakhtigii ay dhimaneysay.
Waxay 21-kii bishii Janaayo ee sannadkii 1978-kii ku dhalatay magaalada Creigiau ee dalka ingiriiska. Waxayna 5-tii bishii Siteembar ee sannadkan 2018-ka ku geeriyootay magaalada Cheshire ee isla dalkaas.
9. Kofi Annan
Isagoo u dhashay dalka Ghana, wuxuu ahaa xog hayihii hore ee qaramada midoobay, wuxuuna mar ku guuleystay abaal marinta nabadda ee Nobel Peace Prize, taasoo ah abaal marinta ugu caansan caalamka.
Annan wuxuu ahaa xog hayihii guud ee Qaramada Midoobay
Annan intii uu noolaa wuxuu diiradda saari jiray sidii looga adkaan lahaa saboolnimada, caddaalad darrada iyo cudurrada.
Wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee Afrikada madow ka soo jeeda ee qabtay xilka xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay.
8-dii bishii Abriil ee sannadkii 1938-kii ayuu ku dhashay magaalada Kumasi ee dalka Ghana. Wuxuuna 18-kii bishii Agoosto ee sannadkan 2018-ka ku geeriyooday magaalada Bern ee waddanka Switzerland.
10. Vichai Srivaddhanaprabha
Wuxuu ahaa ganacsade caan ah oo u dhashay dalka Thailand, wuxuuna ahaa milkiilaha kooxda Leicester City Football Club ee ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska.
Vichai wuxuu kooxda Leicester iibsaday sannadkii 2010-kii
Waxa uu kooxdaas iibsaday sannadkii 2010-kii, wuxuuna tan iyo xilligaas ku dadaalayay sidii uu horumar u gaarsiin lahaa.
Sannadkii 2012-kii ayuu si toos ah u noqday guddoomiyaha kooxda.
Vichai waxaa uu kooxdiisa u hor kacay guushii taariikhiga ahayd ee ay horyaalka Ingiriiska ku hanteen xilli ciyaareedkii sannadkii 2016-kii
4-tii bishii Abriil ee sannadkii 1958-kii ayuu ku dhashay magaalada Bangkok ee dalka Thailand. Wuxuuna 27-kii bishii Oktoobar ee sannadkan 2018-ka ku geeriyooday magaalada Leicester.
11. Jamaal Khaashuqji
Wuxuu ahaa wariye u dhashay dalka Sacuudiga, kaasoo ku caan baxay dhaleeceynta boqortooyada Riyaad.
Khaashuqji wuxuu dilkiisa dhaliyay muran xoog leh
Khaashuqji wuxuu ka mid ahaa wariyeyaasha fara ku tiriska ah ee khibradda ugu badan ku yeeshay saxaafadda caalamka, wuxuuna wareysi la soo yeeshay hogaamiyihii hore ee ururka Al Qaacida Usaama Bin Laadin.
Isagoo baxsad ka ah maamulka Sacuudiga ayuu u wareegay dalka Mareykanka, si uu magan galyo uga raadsado.
Wakhtiyadii ugu dambeeyay noloshiisa wuxuu qoraallo liddi ku ah dowladda Sacuudiga ku qoray wargeyska Washington Post ee laga leeyahay dalka Mareykanka.
13-kii bishii Oktoobar ee sannadkii 1958-kii ayuu ku dhashay magaalada barakeysan ee Madiina. Waxaana 2-dii bishii Oktoobar ee sannadkan 2018-ka lagu dilay magaalada Istambul ee dalka Turkiga.
12. Cawil Daahir Salaad
Cawil wuxuu ka mid ahaa wariyeyaasha ugu caansan ee saxaafadda Soomaalida maanta.
Cawil wuxuu muddooyinkii dambe fadhigiisu ahaa Muqdisho
Dabayaaqadii siddeetanmeeyadii ayuu weriye Cawil Daahir Salaad ka shaqeynayay raadiyaha dowladda ee Radio Muqdisho oo ahaa halka raadiye ee dalka jiray.
22-kii bishan Disembar ayuu ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, isagoo ay da'diisu ahayd qiyaastii 45 sano.
Maxay Mareykanka iyo waddamada reer Yurub u eryayaan diblomaasiyiinta Ruushka?
Amiir Philip oo maanta la bud-dhigay